Madaxweyne Siilaanyo Wuxuu ka Fikiray Wax Aanay Hore Somaliland Tiradaba Ugu Darsan! By: Cumar M. Faarax |
Madaxweyne Siilaanyo Wuxuu ka Fikiray Wax Aanay Hore Somaliland Tiradaba Ugu Darsan! By: Cumar M. Faarax
Ka dib markii ay toddobaadkii hore sababo aan aad loo fasirin dawladda Sucuudigu u joojisay xoolaha uga soo dhoofa Soomaalida oo ay Somaliland-na ku jirto, isagoo taas ka duulaya ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxa uu ku dhaqaaqay tallaabo ah inuu ka shaqeeyo sidii qaran ahaan looga fikiri lahaa in la hello suuq labaad oo loo dhoofiyo xoolaha Somaliland.
Maadaama oo xoolaha Somaliland ay ku tiirsan yihiin saylad keliya oo ah Sucuudiga iyadoo dalka labaad ee soo raacaa uu yahay Yeman-ta colaaduhu halakeeyeen oo iyana faro-guudkood qaadan jirtay, taasina waxay keeni kartaa marka Sucuudigu joojiyo xoolaha Somaliland in dhaqaalaha dalka ay ku dhici karto in inuu yuurursado.
Waxaanu madaxweyne Axmed Siilaanyo ka qarmi waayay inuu qaado tallaabo weyn oo aanay hortii qaadin madaxweyneyaashii xukunka dalka soo maray ama aanay ka fikirin oo ah in qorshe qaran laga yeesho sidii suuq labaad loogu heli lahaa dhoofka xoolaha nool ee Somaliland, si looga badbaado in xayiraada Sucuudigu saaray xoolaha ay dalka ku keento saameyn taban oo dhaawacda kobicii dhaqaalaha.
Madaxweynaha Somaliland, waxa uu Isniintii todobaadkan xafiiskiisa kulan kula yeeshay Wasiirrada xukuumadda ee qaddiyadani khuseyso iyo ganacsatadda reer Somaliland ee xoolaha nool dhoofiya. Waxaanu warbixin dheer ka dhegaystay Wasiirka xanaanada Xoolaha Md. Cabdilaahi Maxamed Daahir iyo ganacsatadda oo uu ku qancay in xoolaha Somaliland ay caafimaad qabaan.
Haddana dawladda Sucuudigu ay joojisay Lo’ laga dhoofiyay dekadda Muqdisho ee dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya oo ay sheegeen inay xanuun ka heleen, arrintaasi oo aan Somaliland waxba ka khusaynin, hase yeeshee saamaysay.
Kadib markii uu madaxweynuhu dhegaystay warbixinta wasiirka xanaanadda xoolaha ee la xidhiidhay bed-qabka xoolaha Somaliland, madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi isku dhaf ah oo ka kooban 5 Ganacsade oo ka mid ah kuwa Xoolaha nool dhoofiya iyo 4 Wasiirr oo kala ah wasiirrada Xanaanada xoolaha, was Ganacsiga, Arrimaha dibadda iyo Maaliyadda. Waxaanu Guddidan isku-dhafka ah u xil-saaray inay qabtaan laba waajibaad oo aan kala dhicin oo waaweyn, kuwaasi oo kala ah:-
1: Madaxweynuhu wuxuu u igmaday xubnahan Wasiirrada iyo Ganacsatada ah inay ka shaqeeyaan oo ay si dhab ah oo qoto dheer uga hawl-galaan sidii Xoolaha dib loogu furi lahaa.
2: In la raadiyo suuqyo kale oo Xoolaha Somaliland mustaqbalka loo iib-geyn karo.
Go’aankaas cad ee madaxweynuhu qaatay, waxaa niyadsami ku soo dhaweeyay aqlabiyada bulshadda Somaliland ee khaatiga ka jooga in xoolaha iibkoodu uu si dabiici ah ugu xidhanaado Sucuudiga oo kaliya, taasi-na ay ka dhalan karto inuu saacadda uu doono joojiyo , xiliga uu jeclaadana dib u furo maadaama oo aanu ka cabsi qabin tartan ay kula galaan iibka xoolaha dalal kale.
Geesta kale wakaaladaha wararka ee caalamiga ah waxay ku qiyaaseen in nolosha iyo dhaqaalaha bulshada Somaliland ku tiirsan yihiin xoolaha nool 70%. moosinka xajka oo kaliya waxa Marsada Berbera ka dhoofa hal milyan oo neef oo xoolo ah. Miisaaniyadii ugu dambaysay ee xukuumadda dhexe ee sannadkan 2016, waxa iibka xoolaha ka soo xarooday $15 Milyan. Halkaas waxaan ka suureyn karnaa sida xooluhu u yihiin lafdhabarta dhaqaalaha Somaliland.
Guddidan, waxa looga fadhiyaa inay maskaxda tuujiyaan oo ay ka soo dhalaalaan labada qoddob ee muhiimka ah ee madaxweynuhu u xushay oo ay xooga saaraan inay raadiyaan saylado kale oo xoolaheenna loo dhoofiyo iyo inay tallo waafiya ka bixiyaan qorshe hilibka lagu warshadeyn karo oo dibada loogu waaridi karo mustaqbalka. Waxa kaloo hortaalla inay ILAAHAY la kaashadaan iyo bulshadda Somaliland ee aqoonta u leh mowduucan qaran ee daruuriga ah.
Ugu dambeyntii, waxaan ku bogaadinayaa madaxweynaha Somaliland tallaabadan wax ku oolka ah ee uu qaaday oo aanay hore tiradaba ugu darsan jirin madaxweyneyaashii isaga ka horeeyay oo ah in aynu hindisno sidii aynu uga ilbixi lahayn suuq keliya ee ay waligeen xoolaheenu ajburnaayeen.
Sidoo kale bulshadda Somaliland ee ku kala nool daafaha caalamka ayaa iyaga-na looga baahan yahay inaanay tallada iyo tusaalaha ku bakhaylin oo ay noqdaan sidii ay horeba dal jireyaasha u ahaayeen inay Guddida ku soo kordhiyaan macluumaad la xidhiidha suuq raadintan cusub ee qarankeenu u sahan tegayo.